Hetsika Photoshop 15 hanovana ny sarinao | Famoronana an-tserasera
Melisa Perrotta | | Graphic Design, Photoshop, dia midika hoe
Raha mitady hampitombo ny fotoana fiasanao ianao dia aza lany andro hamerina ireo dingana mitovy mba hahatratrarana ny valiny farany andrasana. Fampiasana tsara kokoa hetsika photoshop manokana izay hanampy amin'ny fanomezana ny sarinao izay tadiavinao.
Ny programa fanovana manan-danja indrindra an'i Adobe, "Photoshop" dia manana fiteny fandaharana matanjaka be. Io dia mamela anao firaketana ireo dingana amin'ny alàlan'ny hetsika dia avereno ho azy izy ireo amin'ny singa sasantsasany nofidinao. Noho izany, tsy vitan'ny hoe afaka manoratra ny hetsika nataonao ihany ianao, fa afaka manafatra ireo noforonin'ny hafa ihany koa.
Raha hampiasa ireo fihetsika ireo dia mila mampidina ny tianao indrindra amin'ny endrika natolotra ianao avy eo mampihetsika azy amin'ny Photoshop.
2 Hetsika HDR
3 Ora volamena
5 Mainty sy fotsy
6 Sivana manga
7 Mamiratra ny masoandro
8 Vovoka amin'ny rivotra
9 HDR matanjaka
10 Ho tonga alina
13 Hetsika fanodinana hazo fijaliana
14 Fanasongadinana loko
15 Tontolo ratsy
Ity pejy ity dia manolotra fonosana iray Gradients 40 ao amin'ny duotone hahafahanao mampiditra loko marevaka amin'ny sarinao.
Io hetsika HDR io dia mamela misafidy ny hamafiny izay tianao hampifanohitra ny loko.
Ity sivana filentehan'ny masoandro ity ho an'ny Lightroom Homeny ny sarinao izay loko hitanao ihany rehefa milentika ny masoandro.
Rehefa mitady an'izany ianao tonon'ny fahavaratra izay manome loko pastel ny safidy tsara indrindra dia ity setrin'ny hetsika ity.
Hetsika tena ilaina amin'ny mpamorona sary sy mpaka sary rehetra. Miaraka amin'izany preset an'ny sary mainty sy fotsy ho afaka hiasa haingana kokoa ny sarinao monochrome ianao.
Sivana manokana hanome ny sarinao izay mikasika sarimihetsika mafonja.
Mamiratra ny masoandro
Amin'ity hetsika ity dia azonao atao ny manome ny sarinao ny sarinao hamirapiratra sy hafanana. Izy io dia mety tsara amin'ny sary karazana sary ary raha any amin'ny tontolo ivelany no tsara kokoa.
Vovoka amin'ny rivotra
Ity no hetsika mety indrindra raha mitady hamerina a volon'ondry miloko voasasa. Izy io dia mety amin'ny famoronana ny fahatsapana ny vovoka amin'ny rivotra.
Raha te hanome hery ny sarinao ianao manasongadina ny loko sy mamaritra ny sisiny azonao ampiasaina ity hetsika HDR avy amin'ny Shutterpulse ity.
Ho tonga alina
Kitapo fonosana iray tena be
Amin'ity hetsika Photoshop ity dia azonao atao ny manampy a vokatry ny setroka amin'ny sarinao.
Fonosana misy maromaro ity hetsika loko sy ny fivoahan'ny hazavana namboarina namboarina.
Hetsika fanodinana hazo fijaliana
Ny fanodinana dia fiantraikany iray mahomby amin'ny loko mifanohitra fahazoana mifangaro tena mahaliana.
Asongadino ireo loko ny sarinao miaraka amin'ity kinova Shutter Pulse Actions ity.
Raha te-hikasi-tanana ny sarinao ianao, mety tsara ity hetsika ity. Namboarina izy mba hahafahanao manome ny sarinao a fomba maizina, mampatahotra kely.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Hetsika Photoshop 15 hanovana ny sarinao
Ny tetik'asa 5 Kickstarter ho an'ny # DíadelaEarth